note 4g update to v6 stable rom « XMS-MMF
note 4g update to v6 stable rom
note 4g stable rom 6.2.2.0 root မယ်
root.zip >>> http://d-h.st/N5ro
cwm recovery>>> http://www.mediafire.com/download/olknbd6r7bgynmm
root zip ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်…..
updater ကနေ တင်တဲ့နည်းပါ… ဒေါင်းလော့လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဖုန်းမန်မိုရီထဲကို ဒေါင်းထားပါ… ပီးရင် updater>menu ကို နှိပ်လိုက်ပါ.
box တစ်ခုပေါ်လာမယ်… select update package>ခုနက ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်လေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ ဖုန်းက သူ့ဖာသာ အင်စတောလုပ်သွားပီးရင် reboot ကျသွားမယ်၊ မဟုတ်ရင်လည်း reboot now ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးပေါ်လာမယ် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ… reboot ပြန်တက်လာရင် သင့်ဖုန်းဟာ root ဖြစ်ပီပေါ့…(firmware update, unroot) များ ဒီနေရာမှာ ပီးပါပီ…
recovery ကနေ တင်တဲ့နည်းပါ.. note 4gမှာ mi recovery သုံးထားပါတယ်...အသုံးပြုရတာ လွယ်တယ်.... ခက်တာက external sd card ကဟာကို recovery ကနေ flash လို့ မရဘဲ sd card ထဲမှာပဲ update.zip လို့ ဖိုင်နာမည်ပြောင်းပီး install update.zip from sdcard ဆိုပီး သုံးလို့ရတယ်.....
စစချင်း ဘာနဲ့ recovery mode သွားမလဲ...
model အလိုက် volum up/down ကွာသောကြောင့် မိမိဖုန်းနဲ့အဆင်ပြေတာကို နှိပ်စေချင်ပါတယ်…. အပေါ်အောက် ဆင်းဖို့ အသံအတိုးအကျယ် ခလုတ်သုံးပီး enter အတွက် power ခလုတ်ကို သုံးသည်)တရုတ်စာ နှစ်ကြောင်းနဲ့ အဂ်လိပ်တကြောင်း.....
အင်္ဂလိပ်ကိုရွေး..... အထဲရောက်ရင် reboot now, wipe, install update.zip from sdcard, back main menu.... စသဖြင့် တွေ့မယ်… install update.zip ကိုရွေးပါ ပီးရင် ဖုန်းက autorun မယ် ပီးသွားပီဆိုရင် အိုကေနှိပ်လိုက်ပါ… ပီးရင် reboot now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ… ပြန်တက်လာရင် root ဖြစ်ပါပီ… security app>permission>root access ကိုတွေ့ပီဆိုရင် rooted ဖြစ်သွားပါပီ...
supersu zip ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်...
recovery ကို အရင်ဆုံး updater ကနေ flash ရပါမယ်… ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ updater>select update package>choose cwm recovery ကို folder ထဲကနေ ရွေးပေးလိုက်ပီး တင်ပါ….
တကယ်လို့ ဒီနည်းနဲ့ မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ recovery mode ကိုဝင်ပီး install update.zip from sdcard ဆိုတာနဲ့ flash လုပ်ရပါမယ်… အဲဒီ့လိုလုပ်ဖို့က ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကို
update.zip လို့ နာမည်ပြောင်းပီး ဘယ်ဖိုဒါထဲမှမထည့်ဘဲ အပြင်ဘက်မှာထားပါ…ဒါမှ တင်ရင် အဆင်ပြေပါမယ်…
updater>reboot to recovery mode ကို ပြန်ဝင်ပီး supersu.zip file ကို install zip now ဆိုတာ ရွေးပီး တင်ပေးပါ ပီးရင် reboot now နှိပ်ပါ ပြန်တက်လာရင် အိုကေပါပီ….
global rom ကနေ china rom or dev rom ပြောင်းရင် အဓိကဖြစ်တဲ့ google service မပါတဲ့ဟာကို ဘယ်လိုထည့်မလဲ.. ဒါကြောင့် mi market>google installer ကိုဒေါင်းပီး အရင်ဆုံး playstore ကို install လုပ်ပါ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဓိကလိုတာကလည်း ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်နေလို့ပါ ပီးတော့ အဲဒီ့ကနေ ဒေါင်းရင် update ပြန်ပြန်ပီး လုပ်ပေးနေရတာမို့ playstore ရပီဆိုမှ အဲဒီ့ကနေ ဒေါင်းပါ.. လောလောဆယ် ခုနက နေရာက ပြန်ဆက်မယ်.... page တခုတက်လာမယ်...အဲဒီ့ထဲမှာ google framework, acc
sync နဲ့ အားလုံးပေါင်း4file မြင်ရမယ် အောက်ဆုံးမှာ ဖုန်းပုံလေးရှိတယ် အဲဒါလေးကို နှိပ်ပီး အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ... google playstore ကို homepage မှာ မြင်ရပီဆို အိုကေပါပီ..... အောက်ကလင့်မှလည်း ဒေါင်းပီး တင်နိုင်ပါတယ်ဗျ...